Ukuphupha Ugwazwa Kusho Ukuthini?
La inkinga ekhona enkulu naleliphupho yikho ukuthi linesikhali phakathi ngakho alilihle nhlobo. Noma yisiphi isikhali akufanele usiphuphe uma ulele ngisho ngabe asisetshenziswa kuwe. Lokhu kucishe kufane nokuphupha udutshulwa noma umehluko umnane nje kodwa ngizokuchazela.
Kuyenzeka uma uphupha ugwazwa umuntu omaziyo noma ongamaziyo isikhali asiphethe ungasiboni. Sizoqala ngokuphupha ugwazwa usibone isikhali futhi ubone negazi lakho. Ukuphupha ulwa kufana ncamashi naleli lokuphupha ugwazwa.
Lokhu kuchaza ukuthi unesitha esibi esifuna ukuthi ufe kuphele ngawe. Lesisitha kunokwenzeka ukuthi sihlela ukukusebenzisela isikhali sona.
Okunye okuchazwa yileliphupho wukuthi kukhona isitha esikusebenzisela umuthi ukukucupha ukuthi ulimale ngesikhali. Ukuphupha ugwazwa kungasho kuthi ukuthi edlozini lakho kukhona owadlula ngesikhali kodwa wangagezwa ngakho leyongozi ayikavaleki.
Ukuphupha Ugwazwa Wumuntu Omaziyo
Ukuphupha ugwazwa wumuntu omaziye sekuthanda ukucacisa ukuthi ngempela kunomuntu olwa naye. Akubi yilo omphupha ekugwaza ngaphandle uma ulale usebenzise umuthi wokuzibonela izitha zakho ngamehlo. Lo omphupha ekugwaza cha akanacala bakithi khona ocashe ngaye.
Engingakucebisa ngakho nje uma uvuka naleliphupho wukuthi uthole izinduku zokuzivikela noma zokugeza nje amathunzi amamnyama. Uma usuwenze njalo kuzocaca noma ukuphupha ugwazwa kusazobuya yini noma ngeke.
Okunye futhi okusizayo uma uphupha kanje wukuthi ubuke isimo sakho osuke ubhekene naso ngalesosikhathi. Uma kunesimo esinobungozi kodwa ongakwazi ukuziqhelisa kuso yenza njalo.
Ukuphupha Ugwazwa Umuntu Ongamazi
Lokhu kuthi akufane nokubona umuntu omaziyo ekugwaza uphupha. Konke ukulimala kokhomba khona ukuthi unesitha esikujeqeza kabi. Into eyisikhali akufanele uyiphuphe uma konke kuhamba kahle.
Kunokwenzeka futhi ukuthi kukhona owashona wadlula emhlabeni ngenxa yesikhali kodwa lowomkhokha awuzange uvalwe ekhaya
← Ukuphupha Uxabana Nomama Wakho Ukuphupha Umuntu Enqunu →